'बुलबुल'को टिजर: टेम्पो चालिका युवतीको रुपमा स्वस्तिमा खडका | Tv Sansar
स्वस्तिमा खड्का स्टारर फिल्म ‘बुलबुल’को टिजर सार्वजनिक भएको छ। युट्युबमर्फत फिल्मको टिजर सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक टिजरमा नायिका स्वस्तिमा खड्का र मुकुन भुषाल फिचर छन्। फिल्मको एक दृश्यजस्तो लाग्ने टिजरमा स्वस्तिमा खड्काको रुप र हुलिया दुरुस्तै टेम्पो चालिका युवतीको जस्तै देखिएको छ। फिल्ममा स्वस्तिमा टेम्पो चालकको भूमिकामा प्रस्तुत छिन्।
यसअघि फिल्म निर्माण पक्षले फिल्मको एक गीत सार्बजनिक गरिसकेको छ। ‘खुद्रा खाद्रि माया’ बोलको गीतमा निश्चल बस्नेत र रजिना रिमालको स्वर सुन्न सकिन्छ भने भिडियोमा स्वस्तिमाको आकर्षक नृत्य हेर्न सकिन्छ। – ‘खुद्रा खाद्रि माया’ भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
विनोद पौडेलको निर्देशनमा तयार भएको फिल्ममा स्वस्तिमा र मुकुनसँगै बुद्धि तामाङ, दीपक क्षत्री, लक्ष्मी बर्देवा, जोयश पाण्डे, उज्जल अधिकारी ,सृष्टी भट्टराईको पनि अभिनय छ। फिल्ममा निर्देशक पौडेलकै कथा रहेको छ। फिल्मलाई अविरल थापाले निर्माण गरेका हुन् भने कार्यकारी निर्माता रामराजा दाहाल हुन्।
निर्देशक विनोद ‘बुलबुल’ मार्फत स्वस्तिमा खडकाको अभिनयमा नयाँ अवतार देखिने र फिल्म क्षेत्रले एक सशक्त नव नायक पनि पाउने दावी गर्दै आएका छन्। नायिका स्वस्तिमा खड्का स्वयंले पनि यो चलचित्र आफनो करियरकै कोशे ढुंगा हुनेमा ठुलो आशा राखेको बताएकी छिन्। – टिजर हेर्नुहोस्
सिरियामा बम र बारुदको धुँवासंग हार्दै – मानवीयता
अर्जुन पोखरेलको संगीतमा अर्को मिठो गीत ‘संगै जिउने संगै मर्ने’
गौरव र दयाहाङ सँग साइँलीको ‘नाँच माया’
को को भए हैरान ? हैरानै पार्ने ‘हैरान’ को गीत हेर्नुहोस्
Wanna Cook Spicy Chicken at Your Home? Check Out this video
डान्स ग्रुप द हेटौंडा क्र्युजको – नशालु रैछ
जापानिज​ निर्देशकको फिल्ममा नेपालि कलाकारहरुको छमछमी
आकर्षक दृश्यहरु संग्रहित शिवाजको नयाँ म्युजिक भिडियो “जय नेपाल”
नायिका जस्ती गायिका शुशिला पाठकको म्युजिक भिडियो ‘सानीलाई’